हजारौँ लाश र ध्वस्त ट्यांकले ढाकिएका सडकहरू, रूसी सेना हटेपछि युक्रेनमा जे देखियो…. — Sanchar Kendra
हजारौँ लाश र ध्वस्त ट्यांकले ढाकिएका सडकहरू, रूसी सेना हटेपछि युक्रेनमा जे देखियो….
बुचा, युक्रेन (बीबीसी) । बुचा सहर किभलाई घेरा हाल्ने र राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको सरकारलाई पतन गर्ने रसियाको सपनाको चिहान हो। यो त्यही ठाउँ हो जहाँ रुसको उद्देश्य धराशायी भएको थियो। फेब्रुअरी 24 मा, रूसले युक्रेनमा आक्रमण गरेको दुई वा तीन दिन पछि, युक्रेनी सेनाले बुचाबाट किभ तर्फ गइरहेका रूसी ट्याङ्कहरू र सशस्त्र गाडीहरू नष्ट गरे।
यो लश्कर धेरै युक्रेनी सेना द्वारा नष्ट भएको थियो। यस सहरबाट युक्रेनी सेनाले रुसी सेनालाई किभतर्फ जान पसिना छुटाइदिएको थियो । अहिले बीबीसी टोली बुचामा आइपुग्यो किनकि रूसले शुक्रवार बुचाबाट आफ्नो सम्पूर्ण सेना फिर्ता लगेको थियो । जुन पूर्वी युक्रेनमा युद्धमा ध्यान केन्द्रित गर्ने क्रेमलिनको “शान्त र व्यावहारिक” निर्णयको एक भाग हो।
रुसले मध्य युक्रेनमा युद्धको आफ्नो लक्ष्य हासिल गरेको र उसको उद्देश्यमा किभ कब्जा गर्नु कहिल्यै समावेश नभएको बताएको छ। तर सत्य यो हो कि रुसले युक्रेनबाट अप्रत्याशित प्रतिरोध र व्यवस्थित विरोधको अपेक्षा गरेको थिएन र यही कारण युक्रेनले रुसलाई राजधानी किभ बाहिर रोकेको थियो । रुसका ध्वस्त ट्याङ्क र बख्तरबन्द सवारीसाधनको भग्नावशेषले यसको प्रमाण दिन्छ, जुन अझै पनि बुचाको सडकमा छन्।
युद्धको दुई वा तीन हप्ता पछि, रूसी सेनाले आफ्नो गति गुमायो। यो बुचाको सडकमा स्पष्ट देखिन्छ। रुसको एयरबोर्न फोर्सका एलिट ट्रुप सशस्त्र गाडीमा सहरमा आएका थिए। यी सवारीसाधनहरू यति हलुका थिए कि विमानबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान सकिन्छ।
बुचाबाट केही माईल टाढा रहेको होस्टोमेल एयरपोर्टमा अवतरण गरेपछि यी एलिट ट्रुप यहाँ आएका थिए। यो विमानस्थल रुसी अर्धसैनिकहरूले कब्जामा लिएका थिए। रुसी सेनाले बुचाबाट किभमा तोपहरू लैजाँदै गर्दा रुसले युक्रेनी सेनाले कडा प्रतिक्रिया दिएको थियो । यहाँका सडकहरू साँघुरो र सीधा छन्, एम्बुस वा गुप्त आक्रमणका लागि उपयुक्त छन्।
युक्रेनले टर्कीबाट खरिद गरिएको बेयरख्टर ड्रोनको साथ रुसी लश्करमाथि आक्रमण गरेको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताए। वरपरका इलाकामा बसोबास गर्ने अरूले बताएअनुसार युक्रेनी सेनासँगै रक्षा स्वयंसेवकहरू पनि यहाँ उपस्थित थिए।
युक्रेनले लश्कर रोक्न सफल भयो, रुसका मुख्य गाडीहरू ध्वस्त भए तर भग्नावशेष भने जस्ताको तस्तै छ । अझै पनि ३० एमएमका तोपका गोलाहरू घाँसमा लडिरहेका छन्, अझै धेरै खतरनाक गोलाहरू सडकमा छन् । स्थानीय मानिसहरूका अनुसार धेरै युवा रूसी सैनिकहरू भागे र केहीले समातिएपछि आफ्नो ज्यानको भिख माग्न थाले।
एक ७० वर्षीय पुरुषले आफूलाई अंकल हेरिशा भनेर चिनाउँछन्। उनी भन्छन् “मलाई उनीहरुको लागि दु:ख लाग्यो। उनीहरू १८ देखि २० वर्षका केटा थिए र उनीहरूको अगाडि आफ्नो सम्पूर्ण जीवन थियो ।’
यस्तो देखिन्छ कि बुचाबाट बाहिरिँदा रूसी सैनिकहरूले कुनै दया देखाएनन्। रुसी सेनाले बुचा क्षेत्र खाली गर्दा कम्तिमा २० जना मृत रुसी सैनिकहरू सडकमा लडिरहेका थिए । उनीहरूको हात पछाडि बाँधिएको थियो।
यस क्षेत्रका मेयरले आफूले २८० जनाको सामूहिक दाहसंस्कार गरेको बताए । यस क्षेत्रमा बसेका आम मानिसहरुले रुसी सेनाबाट भाग्ने प्रयास गरेका थिए । बिजुली र ग्यासको आपूर्ति नहुँदा घरअगाडि आगो बालेर खाना पकाए। स्वैच्छिक र युद्धबाट प्रभावित नभएका ठाउँहरूबाट बुचामा मद्दत ल्याइरहेका थिए।
हातमा प्लाष्टिकको झोला बोकेकी मारिया नामकी महिलाले झोलालाई देखाउँदै भनिन्, ‘मैले पछिल्लो ३८ दिनमा यो पहिलो ब्रेद खान लागेकी छु ।’ मारियाकी छोरी लारिसाले मलाई उनको सोभियत शैलीको अपार्टमेन्ट देखाइन्।
विनाशको यो दृश्यले बिस्तारै होस्टमेल एयरपोर्टमा लैजान्छ। रुसी सेनाले यो विमानस्थललाई बेसको रूपमा प्रयोग गरेको थियो। विमानस्थलमा बनेका ठूला ह्याङ्गरका छानामा अहिले धेरै धारिलो छर्राका प्वालहरू देखिन थालेका छन् ।
संसारको सबैभन्दा ठूलो कार्गो विमान यहाँ पहिले नै नष्ट भएको छ। यसको नाम मार्रया थियो, जसको अर्थ सपना हो। यो विमान भाँचिएको छ, र इन्जिनका ठूला टुक्राहरू जमिनमा लडेका छन्। यो विमानमा जे भयो, युक्रेनमा पनि त्यस्तै भएको छ । विमान युक्रेनको गौरवको प्रतीक थियो, युक्रेनको सम्भावनाको प्रतीकको रूपमा यसलाई पेश गरिएको थियो ।